Maanta waxaan soo bandhigeynaa Romkii ugu fiicnaa ee loogu talagalay Lenovo K3 Note | Androidsis
Waan sii wadaynaa waanada iyo Roms loogu talagalay Lenovo K3 Note, Terminal dareen leh 2 Gb oo xasuusta RAM ah iyo Mediatek MTK6752 Octa Core 1,7 Ghz processor kaas oo waxaad ku heli kartaa wax ka yar 150 euro. Tilmaamo taxane ah si loo helo qalabkan xiisaha leh ee 'Android' si uu noo siiyo awood iyo waxqabad ay ku leedahay caloosheeda sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan, sida kiiskan adigoo soo bandhigaya waxa suurtagal ah Rom ugu fiican ee Lenovo K3 Note.
Rom-kan, aniga ahaan sida ugu fiican xilligan qalabkan cajiibka ah ee ka socda Lenovo, waa abuuritaan muhiim u ah kuwa waaweyn Xancin de Mobiles-ka DualSIM, taas oo aan shaki ku jirin madasha ugu fiican ee Android illaa iyo inta laga helayo boosteejooyinka asalka Aasiya. Marka hadda waad ogtahay, dhibcaha oo dhan, waxay uqalmeen kuugan weyn ee Android.
1 Muxuu kan aniga ii ah Rom ugu fiican ee Lenovo K3 Note na siinayaa?
2 Soo dejiso faylasha lagama maarmaanka ah
3 Habka ugu fiican ee Biligleynaya Rom ee loogu talagalay Lenovo K3 Note; Rom AOSP V2_1 REV4 waxaa qoray Xancin
4 Ogeysiis muhiim ah oo maskaxda lagu hayo:
Muxuu kan aniga ii ah Rom ugu fiican ee Lenovo K3 Note na siinayaa?
Tani shaki la’aan aniga ahaan Rom ugu fiican ee Lenovo K3 Note tan iyo, oo aan lagu darin codsiyada cabsida leh ee heerka caadiga ka ah Lenovo Roms-ka, codsiyo badan oo buuxiyo iyo gaar ahaan barnaamijyada basaasnimada, waxaan ku leenahay tan AOSP rom oo ku saleysan Android 5.0.2, ikhtiyaarka ugufiican ee bartayada xaragada leh ee Android oo kumanaan kun laad siisa kumbuyuutarro badan oo qiimahoodu aad u badan yahay iyo xitaa heerar kala sareeya.
In kastoo Ma lahan waxqabadyo u gaar ah Lenovo sida Wide Touch, Smart Capture ama kamarad u gaar ah, Waa inaan kuu sheegaa inaysan waxba ka maqnayn maadaama tusaale ahaan kamarada google kaas oo loo rakibay heer ahaan, wuxuu ka dhigayaa inta ugu badan optics-ka terminal-ka Android. Dhinaca kale, haddii aan rabno inaan rakibno codsi kaamirad ka casrisan, oo aan ka heli karno qaabab badan iyo waxyaabo dheeraad ah, shaki la'aan waxaan kugula talinayaa inaad soo dejiso oo aad rakibto Lenovo Super Camera en Qaabka APK ee isla iskuxirahan.
Sida dhawaaqa, cunsur wax badan ka tagaya oo la doonayo sida caadiga ah ee ku jira Lenovo K3 Note, weyn Xancin ayaa mas'uul ka ahaa ku dar dhammaan codsiyada lagama maarmaanka ah si mugga iyo tayada codkiisu ay sax uga badan yihiin, xitaa ka sarreeya kan Latest Android 5.1 Kariyey Rom ku salaysan Lenovo rasmiga ah in aan halkan kuugu soo bandhigay Androidsis.
Soo dejiso faylasha lagama maarmaanka ah
Faylasha loo baahan yahay waxay ku kooban yihiin oo keliya feyl la isku duubay oo qaab ZIP ah oo aan awoodi doonno ka soo degso isla isla xiriiriye. Markaad soo dejiso oo aad nuqul ka sameysato adigoon hoos u dhigin xusuusta gudaha ee Lenovo K3 Note, waxaan dooneynaa inaanu gebi ahaanba damino terminalka oo waxaan u soconaa dib uga soo kabashada dib u habeynta wax laga beddelay Si loo sii wado rakibaadda iyo biligleynta tan ugu fiican Rom ee loogu talagalay Lenovo K3 Note. (Si aad u gasho qaabka soo-kabashada ee wax laga beddelay, laga bilaabo gebi ahaanba galka terminaalka, waxaan u daareynaa adoo riixaya mugga lagu daray iyo badhamada laga jaray isku mar, inta aan gujineyno ah Badhanka awoodda, saddexda badhan isla mar ahaantaana aan la sii deyn ilaa iyo inta soo kabashada wax laga beddelay ay muuqato).
Hadaad wali na haysato Xididgalee Lenovo K3 Note oo rakibay Soo-kabashada la beddelay at, Waxaan kugula talinayaa inaad dhex marto qoraalkan taas oo aan ku sharaxayo wax walba talaabo talaabo oo aan ku daro dhamaan qalabka lagama maarmaanka u ah hanashada.
Habka ugu fiican ee Biligleynaya Rom ee loogu talagalay Lenovo K3 Note; Rom AOSP V2_1 REV4 waxaa qoray Xancin
Waxaan aadeynaa xulashada Tirtir, waxaan xulanaa Cabbirta saafiga ah oo waxaan u tirtirnaa wax walba marka laga reebo waddada aan ku soo guurinay Zip-ka Rom. Tusaale ahaan haddii aan ku soo guuriney xusuusta gudaha ma qaabeyn doonno SDcard-ka Gudaha.
Waxaan u tagnaa ikhtiyaarka rakibidda oo waxaan ku wareejineynaa 'zip zip' oo aan ku xaqiijineynaa biligleynteeda adigoo ku dhejinaya baarka TWRP.
Dhamaadka waxaan kaliya dooran doonaa ikhtiyaarka reboot iyo gudaha System.
Terminalku wuxuu dib ula bilaabi doonaa astaamaha cusub ama Sawirka bootka ee Android AOSP, taasi waa Android saafi ah, ku sabir koodhkan ugu horreeya ee Rom maxaa yeelay waxay qaadan kartaa waqti dheer, sidoo kale inta u dhexeysa shan daqiiqo iyo toban daqiiqo. Markay gebi ahaanba dib u bilaabato, waxaad kaliya u baahan doontaa inaad isku xirto xiriirintaada, xisaabaadka emaylka iyo sidoo kale inaad dib u cusbooneysiiso dhammaan codsiyada aad ugu jeceshahay inaad tan ku raaxeysato, Rom ugu fiican ee Lenovo K3 Note.
Ogeysiis muhiim ah oo maskaxda lagu hayo:
Waxaan kula talinayaa dhamaantiin rakibaya Rom-kan inaad daawataan fiidiyowga ku lifaaqan dusha sare ee maqaalkan, fiidiyoow kaas oo, marka lagu daro aan idin tuso sida Romku u shaqeeyo, waxaan idin siinayaa laba talo oo qiimo leh wax badan ka hel batteriga of terminal-kan Android, iyo sidoo kale hawlgalka saxda ah ee processor MTK6752 cajiib ah adoo adeegsanaya ikhtiyaarka ah inaad barnaamijka ku shubto terminal-ka iyo dansan
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Lenovo » Romka ugu fiican ee loogu talagalay Lenovo K3 Note waa AOSP Rom oo ka socda Xancin
Dhamaan mahadsanid Kaliya hal dhibaato ayaan qabaa. Labada kamarad iyo baare feylkuba waxay ii sheegaan inaysan jirin wax xusuus ah, si loo isticmaalo kaamirada waa inaan rakibo kaarka SD. Sababtoo ah?
Waxaan u maleynayaa in asalka dhibaatooyin dhowr ah sidaada oo kale ay tahay in romkaankan aan rakibnay uusan aqoonsaneyn wadarta xusuusta gudaha. Xaaladdayda, waxay muujineysaa inay 100% ku mashquulsan tahay codsiyo, iyada oo loo qoondeeyay awood dhan 310 MB. Suuragal ma ahan inaad kala soo baxdo codsi kasta oo cusub, ama xitaa soo degsato maadaama ay tixgelinayso inaysan jirin xusuus gudaha ah oo la heli karo. Xitaa ma ogola in la furo codsiyo badan maxaa yeelay waxaan u maleynayaa in howsha bilowga ee codsiyadaas aad u baahan tahay inaad ku dhereriso feylasha qaar xusuusta.
Waa la qaddarin lahaa haddii dhibaatadan lagu xallin lahaa romka ama haddii qof ogyahay dariiqa loogu qasbo android inuu aqoonsado wadarta xusuusta gudaha ee terminal-ka, way na caawin doontaa, maadaama haddii kale aan jeclahay romka oo ay soonka ku rakibto.
Waad salaaman tihiin maalin wanaagsan;
Waxaan ku cusbaahay golaha, si dhib ahna waan ogahay sida ay u shaqeyso.
Waxaan rabaa inaan sharaxaad ka bixiyo dhibaatada aan ku qabo LENOVO K3 cusub, oo aan ka soo iibsaday Shiinaha.
Marka lagu daro rakibida codsiyada qashinka ah, waxaan isku dayay inaan galo qaabka soo kabashada, mana ii ogolaato, had iyo jeer waxay dib ugu bilaabataa qaab caadi ah.
Haddii qofna i caawin karo, aad baan u mahadcelin lahaa.
PS Waxaan riixay saddexda badhan v +/- oo bilaabi, sidoo kale waxaan rakibay Quick Boot iyo> Rebooter, laakiin sidoo kale ma shaqeynayo.
Waa salaaman tahay Francisco, ugu horreyntii, aad baad ugu mahadsan tahay casharradaadii aad waxtar badan u lahayd. Wax kasta oo ku habboon iyaga la. Waxaan hayaa roogaankan oo si fiican ayuu u shaqeeyaa laakiin ma arko meel aan ku hagaajiyo tuubada laba-laabka ah. Haddii adiga ama qof kale ii jawaabi lahaa aad baan u mahadcelin lahaa!
Ku jawaab Gabri
Nabade Francisco, waxaan rabay inaan kuu sheego haddii aad i caawin karto.
Telefoonku wuxuu kuxiranyahay sifiican kumbuyuutarka, waxaan socodsiiyaa recovery.bat, moobilku wuxuu galayaa qaabka saxda ah laakiin halkaas ayuu kusii nagaanayaa, kumbuyuutarka kumbuyuutarkana wuxuu ii sheegayaa inaan sugayo mobilada waxkalena ma qabanayo, sidaa darteed dib uhabaynta la hagaajiyay lama rakibin.
Moobilkani wuxuu la yimaadaa soo kabasho aasaasi ah oo Shiinaha iyo Ingiriisiga ah laakiin kuma kalsoona inaan rakibo romka ka soo kabashada aan kuu sheegayo.
Rooting ma ii shaqeyn, markaa waxaan adeegsaday Iroot wayna shaqeysay. Soo kabashada twr waxay u soo dejisaa sida codsi oo u maaree si aad u rakibto romka
Waad salaaman tihiin, romka waan rakibay wuuna tagaa PERFEEEECTA laydh aadna u dheecaan badan laakiin launcherku waa xunyahay, waxaan dhigay smart launcher oo waa dheecaan badan.
Kaliya waxaan qabaa hal su'aal, waxaad dhahdaa waa wax aad ufiican in la isticmaalo nidaamka waqtiga goynta waqtiga habeenkii in muddo ah, laakiin waxaa ii soo baxday markaan kiciyo inaan helo mobilada oo aan laheyn adeeg taleefan maxaa yeelay waxay u baahan tahay in la dhigo biinka, kaas oo waa ka go'an yahay muddo dheer qadka, sideed tan u xallin?
Waad ku mahadsan tahay wax ku biirintaada iyo sharraxaadda wanaagsan.
Ku jawaab ramon43
Ka saar biinanka oo dhibaatada la xaliyay.
Jo, aasaasi iyo aniga sidii casaan-garad
Haye, Francisco, waxaan rakibay kamaradda lenovo apk qaladna way i siisaa. Qof baa rakibay oo si sax ah ayuu u shaqeeyaa, ma inaan siino wax fasax ah oo gaar ah? Waad ku mahadsantahay horay.
Salaan! Mudo intee le'eg ayay ku qaadataa in terminal-ka dib loo bilaabo? Maxaa yeelay waqti badan ayey igu qaadaneysaa 🙁
Waxaan raacay tillaabooyinka si sax ah, hadana astaan ​​ayaa ka muuqata shaashadda, madaxa android buluug ah, mana jirto wax horumar ah
Ma jiraa qof og in sugitaan intaas la eg uu caadi yahay ??????
Fadlan caawi !!
Waad salaaman tahay, ma i caawin kartaa, waan rakibikaraa romka laakiin waqtigaan dib u bilaabayo shaashadda waxay ku sii jirtaa monillo buluug ah oo leh halo yar oo hareeraheeda ka soo baxaysa wax kale oo aan halkaas ka soconina ma jiraan, maxaan sameeyaa Fadlan caawi aniga
Ogeysiiska la keenay ma daarmayo ROM-kan, ugu yaraan haddii qof ogyahay inaad u baahan tahay inaad ka hagaajiso meel, fadlan ka faallo, codadka iyo ogeysiisyada waxaad dooran kartaa midab, laakiin aniga ima shaqeynayo. Mahadsanid.
Dhibaato isku mid ah ayaa i soo martay oo waxaan ku xaliyay barnaamijka Light Flow. Halkaas waxaad ku dari kartaa dhammaan codsiyada aad rabto inaad muujiso ogeysiiska la keenay, gariirka dhawaaqa iwm. Waxaan hayaa nooca lacagta la siiyay mana ogi inuu midka bilaashku shaqeynayo.
Ubaxyo Edd dijo
Ka waran Dani ... Waxaan qabaa isla dhibaatadaas oo ogeysiiska la keenay uusan daarin, kaliya wuxuu isu beddelaa casaan markii uu bilawdo terminalku inuu lacag bixiyo oo uu damiyo marka dacwadu dhammaato. Waan rakibay barnaamijka aad sheegatay laakiin maheli karo inaan daarto ogeysiisyada. Talooyin kasta oo ku saabsan sida loo qaabeeyo barnaamijka inuu shaqeeyo? Mahadsanid!
Jawaab Edd Flores
Waxaan hayaa mobaylkan mudo 3 isbuuc ah usbuucna fariin ayaa u muuqatay inaysan ku xirmi karin serverka google kumana socon karo ama ma sameyn karo wax taleefanku shaqeeyo iyo shabakada sidoo kale waxaan gali karaa oo kaliya Khariidada wax kasta oo kale ma shaqeynayaan hadii waad damisay ama dib udaabac waxaa markale kuxiran fariinta ah inaadan kuxirin google server
Haddii qofna ogaado waxa ku saabsan tani ama ii sheegi kara waxa aan sameeyo MAHADSANID
Mahadsanid, Dani waan isku dayi doonaa.
Galab wanaagsan Francisco, kadib markii aan wax badan is idhi waxaan u maleynayaa in aan helay asalka dhibaato muhiim ah oo soo korortay kadib markii aan ku rakibey romkaankan K-3 (horey ayaan uga soo jawaabey faallooyin ka yimid Nacho). Rakibaadda si dhakhso leh oo sax ah ayaa loo fuliyay, laakiin markii la soo degsanayo codsiyada, isla waqtigaas oo soo dejintu bilaabmayso, waa la joojinayaa oo daaqad pop-up ah ayaa u muuqata oo muujinaysa "Codsiga Bakhaarka Google Play ayaa istaagay", oo galaya wareeg, waa lagama maarmaan in xoog lagu joojiyo.
Kaamiradu waxay weydiisaneysaa kaarka SD-ga in la galiyo: Waxaan u maleynayaa inay tahay sababta oo ah waxay ogaaneysaa in xusuusta gudaha ay buuxsan tahay mana aqoonsana xusuusta SD ee aan galiyay.
Dhowr codsi ma furna, suura gal ahaan asalka dhibaatadu waa isku mid.
Kaydinta waxay tilmaamaysaa in xasuusta gudaha ay ka buuxdo codsiyo, iyada oo loo qoondeeyay wadar ahaan awood dhan 310 MB, marka tani ay aad u ballaaran tahay.
Wax walba waxay iga dhigayaan inaan u maleeyo inay tahay dhibaatada aqoonsiga xusuusta, ha ahaato gudaha ama dibedda. Ma garanayo suurtagalnimada in wax laga beddelo romerka lana cusbooneysiiyo si dhibaatadan aan loo soo saarin, ama habka loogu qasbo android inay aqoonsato xusuusta oo dhan, laakiin xaqiiqadu waxay tahay, haddii aan xal loo helin, waa wax aan macquul ahayn si loo rakibo barnaamijyo cusub.
Aad baad ugu mahadsan tihiin shaqadiina oo dhan.
Isla waxbaa igu dhaca aniga, ma xallin kartaa ama ma heli kartaa romar kale?
Habeen wanaagsan Xancin-kii weynaa, abuuraha romanka., Wuxuu i siiyay xalka: waa lagama maarmaan, marka lagu daro in la tirtiro dhammaan xusuusta gudaha ee taleefanka, sidoo kale "qaabka xogta" (tillaabadan laguma sharxin casharka Francisco Ruiz), laakiin waa xusuusta ayaa nadiif u ah. Waxaad ku dhaqaaqeysaa tillaabooyinka kale si la mid ah tababarkii. Way ii shaqeysay aniga taleefankuna si fiican ayuu u shaqeeyaa, romarku aad ayuu u fiican yahay dhibna iima siin.
Waad salaaman tahay, qof ayaa ii sheegi kara sida loo rido raadiyaha, wuxuu leeyahay way leedahay meelna kuma arko. Mahadsanid !!
Waa salaaman tahay Pablo, haddii uusan khalad dhicin, waxay la imaanaysaa romka. Waxaan ku haystay shaashadaha codsiyada dugsiga sare. Guji wareegga dhibcaha leh ee ku yaal qaybta hoose ee hoose shaashadahana waa la soo bandhigayaa, waxaad uga dhaqaaqi kartaa bidix ilaa midig, midkoodna waa tuner-ka. Sikastaba xaalku ha ahaadee, hadaadan heli karin, mid waad kala soo dagsan kartaa Pay Store.
Nabadeey Juan, waxaan raacay tillaabooyinka oo dhan laakiin taleefanka ayaa bilaabmaya oo kaliya astaanta shabakada iyo batteriga ayaa u muuqda
Ku jawaab oscar marcos
Waad salaaman tihiin, waxaan la joogay romkaan rakibay mudo dheer waxa kaliya ee aan badalayna waxay ahayd launcher-ka aan ku dhejiyay smartka. Waxaan ogaaday laba dhibaato oo aanan garanayn sida loo xaliyo, mid waxay ku taal aaga Wi-Fi, wuu ii ogolaadaa inaan aasaaso iyada oo aan dhibaato jirin, waxaan dhigayaa amniga iyo furaha sirta ah, laakiin waxaan ku arkaa kumbuyuutarka laakiin ma awoodo isku xir. Iyada oo xulashada isku xirka USB, ay ku xirmayso.
Dhibaatada labaad ayaa ah kadib markaan sameeyo otomaatiga si otomaatig ah habeenkii, subaxdii markii la i soo waco kaliya shaashada ogeysiiska ayaa soo muuqaneysa laakiin ma soo garaacayso, waa inaan aadaa goobaha codka oo aan doortaa codka ka dibna mar kale ayuu codeeyaa.
Ayaa dhibaatooyinkan soo maray? haddii kale romku waa dheecaan badan yahay arimahan mooyaane wax kasta oo kale si fiican ayey u shaqeeyaan.
Waad ku mahadsan tahay dhammaan wada shaqeynta
Waad salaaman tihiin. Terminal-ka ayaa hadda yimid, xididaysan yahay lana rakibay, ROM-ka cusubi waa mid hagaagsan. Waxa kaliya ee jira ayaa ah inuusan aniga igu xirneyn PC-ga, ima aqoonsanin, sidoo kale ikhtiyaarka isku xirka MPT ma muuqanayo taleefanka, iwm. Ma inaad wax kale rakibtaa? Mana laha OTG sidoo kale…. ma sidaas baa? Taasi waa inaan sameeyaa? Mahadsanid
Hagaag, waan hagaajiyay, sababo jira awgood USB-gu gudaha ugama hawl galin. Tijaabooyin badan ka dib, aakhirka codsi la yiraahdo USB Host Check ayaa aniga ii go'an. Hadda waxay ku xiran tahay kombuyuutar kasta iyada oo aan la sii fahmin. Haddii ay waxtar leedahay
Ma muhiim baa in xididada laga jaro ka hor inta aan si sax ah loo adeegsan karin romka?
Waxaan hayaa ROM-kan oo ku shaqeynaya terminaalka waana inaan sheegaa inay tahay wax la yaab leh sida ugu wanaagsan ee ay u shaqeyso. Isbedelka kaliya ee aan sameeyay wuxuu ka yimid Nova Launcher ilaa Yandex, oo aad u dhameystiran.
Khasaaraha kaliya ee aan ku dhajin karo qofka waddanka u dhashay ayaa ah in tooshku ama alaarmiga (xitaa dhawaaqa) midkoodna uusan shaqeynin
Barnaamijyada la soo dejiyey, Facebook Messenger wuxuu dib u bilaabayaa mar kasta oo aan isku dayo inaan soo galo (dhibaato aan ku qabay ROM-ka taxanaha ah) iyo Barclays mid wuxuu ii sheegayaa inuusan ku shaqeyneyn taleefannada gacanta.
Aad baad ugu mahadsantahay taladaada iyo websaydhkaaga oo dhameystiran!
Marka waxaan u baahanahay inaan cusbooneysiiyo android-ka 5.0.2 marka hore? tan iyo markii taydu ii timid 5.0
Ku jawaab xcelestex
Waad salaaman tahay, waad ku mahadsan tahay fiidiyowyada, waxaan kuu sheegayaa in xiriirka aad wadaagtay uusan u oggolaanayn ROM inuu soo dejiyo, waad iga caawin kartaa inaan soo dejiyo, mahadsanid
Waad salaaman tahay, hees ma u dhigi kartaa cod ahaan?… Waxaan kaliya u kala beddeli karaa xulashooyinka caadiga ah ee ay ku siiso.
Waxaan hayaa arjiga Raadiyaha Faransiiska iyo codsiga Raadiyaha Kanada. In kasta oo aan haysto xog moobil ah, midkoodna ma shaqeeyo.
Markii aan ku xiro wifi si fiican ayey u shaqeysaa, laakiin xogta moobiilka ma shaqeynayo.
Waxaan isku dayay codsiyo kale oo Raadiyaha khadka tooska ah ah xilliganna ma jiro xarun internet oo aniga ii shaqeeya.
Ma jiraa qof og waxa ay noqon karto sidee baanse u hagaajin karaa?
Haddii aad rabto in hees u dhawaaqdo cod ahaan, waa inaad ku riddaa xusuusta moobaylka galka ringtones waxayna la muuqanayaan inta ka hartay codadka uu moobiilku keenayo.
Wanaagsan, waxaan raacay tillaabooyinka oo dhibaato ayaan la kulmay maxaa yeelay romka ayaa iga dhammaaday oo kaliya ricovery, sidoo kale nuqul keyd ah oo aanan haysan. Maxaan sameeyaa
Nabadeey Juan, waxaan soo rogay labo K-3s talaabooyinka qaarna wax yar ayey igu kallifeen, waxyaabo cusub, laakiin waxaan kuu xaqiijin karaa in natiijadu ay tahay mid cajiib ah, roman-ka Xancin waa bilaa cillad oo wuxuu u shaqeeyaa sida xabadda oo kale.
Si aan u caddeeyo naftayda, waxaan sameeyay buug bilow ah (oo aanan dhihi karin), iyadoo dhammaan tillaabooyinka oo faahfaahsan, la joojinayo gaar ahaan qodobbada ay dhibaatooyinka i siisay.
Haddii aad rabto, waxaan ku siin doonaa buugan haddii ay ku caawiso. Ma aqaan sida tan loo sameeyo, laakiin haddii aan sharci lagu xadgudbin, u soo dir e-maylkaaga golaha, ama emaylkayga: manuel.gargom@gmail.com,
Waan ka xumahay haddii tani aysan ahayn nidaamka saxda ah.
Jawaab Manuel Garrido.
Waad salaaman tihiin, dhowr jeer ayaan isku dayay inaan rakibo TWRP, waxay kuxirantahay pc ganaax laakiin qaabka fastbood ayaa ka muuqda moobilkeyga rakiibuna halkaas ayuu ku sii jiraa, markaa aniga aniga macquul iima ahan.
Fadlan maxaa xal ah?
Mahadsanid Francisco! Runtii waxaad iga caawisay kiilo sidii aan u adeegsaday khibrad la’aanta taleefanka gacanta ee cajiibka ah. Waxaan dhegta u taaganahay wararka aad xilliyada qaar nooga keento terminalkan gaarka ah iyo guud ahaan dunida android, nin mahadsan!
Ku jawaab watesapo
Habeen wanaagsan, waxaan ku rakibay ROM-kayga Xusuusin k3 ah waxaanna helayaa shaashad Shiine ah mana garanayo waxa aan sameynayo. Intaa waxaa sii dheer, sim2 wuxuu joojiyay shaqadii, waxaa laga yaabaa inay wax ku leedahay farriimaha aan hoos uga tago.
Fariinta ugu horeysa:
Tani waa tan labaad
Caawinaad kasta oo aan qadariyo
Dadyahow waad salaaman tihiin, weydiin, dabcan, raali ahow jahliga, adoo u rogaya romkaankan, bedel kooxaha 4 G ?? mise waxba kuma qabanayso hal shay kan kale ??? waa in loo adeegsadaa Argentina, taas oo aad ugu baahan tahay 'band 4' ...
Waa salaaman tahay, si sax ah dhowr jeer u rakib romka, wax walboo si fiican ayey u shaqeeyaan, marka laga reebo SIM-ka, waxay ku ogaataa jajabyada midkoodna laakiin adeeg ma haysto… Waxaan ka imid Argentina. Xal kasta ??
Hello Alejandro, sida muuqata waa inaad u habeysaa APN-ka (magacyada goobaha marin-u-helka) ee wadaha si aad u hesho internetka, taasi waxay ku jirtaa qaabeynta shabakadda moobiilka.
Waad salaaman tihiin dhamaantiin. Waxaan horey u cusbooneysiiyay K3-gaaga 5.1, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aad uga saari karto joornaalka shaashadeeda dhibka badan. Goobtu aniga sidoo kale iima shaqeyso Qofna ma i caawin karaa? Aad baad u mahadsantahay.
Ku jawaab stoypillao
K3 horey ayaa loo cusbooneysiiyay ilaa 5.1? Miino wali ma imaaneyso waxaana igu qasbay inaan xidido oo aan sameeyo wax kasta oo kale. Runtii waa ruugga ugu fiican ama waxaa jira mid kale oo ka fiican oo aan lahayn dhibaatooyin badan waxaan rajeynayaa inaad iga jawaabi karto. manuel.gargom@gmail.com Ma ii soo diri kartaa liistadaas bilowga ah si ay wax waliba aniga ila noqdaan, mahadsanid
Galab wanaagsan Gustavo. Rooma kasta oo cusub oo aad ku dhejiso mobilada, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso nidaamka oo dhameystiran. Anigu kumuu rakibin romar kale mobilka, sidaa darteed ma garanayo sida kuwa kale u shaqeyn doonaan, laakiin marka la barbardhigo asalka, waxaan kuu sheegayaa in Xancin ku dhowaad si buuxda loo tarjumay, ma lahan barnaamijyo xanaaq leh, waad ku hagaajin kartaa adiga jeclaan iyo isticmaalka Battery waa qiyaastii saddex meelood meel waxa asalka cunaa.
Haddii aad i siiso cinwaan emayl, waxaan si farxad leh kuugu soo diri doonaa buugga bilowga ah.
Waad ku mahadsantahay inaad iijawaabtay, waxaan jeclaan lahaa inaad ii soo dirto romka iyo talaabooyinka aad hayso, emailkaygu waa gusconsencebe@hotmail.com Hore ayaan kuugu mahad naqayaa waxaan ku kalsoonahay in romkaanku ka fiican yahay kii asalka ahaa.
Habeen wanaagsan super rom-ka, laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo raalli ahaansho, ma ogtahay haddii ay jirto si kasta oo awood u siinaysa ikhtiyaarrada adeegsadayaasha, kama heli karo liiska qaabeynta.
Ku jawaab inaad rabto
hello, waxaan rakibay 5.1 laakiin taabashada ayaa bilaabay inay dhibaatooyin i siiso, ma isla waxbaa qof ku dhacay ???? Waxaan jeclaan lahaa inaad ii soo dirto buugga bilawga ah fadlan, mahadsanid kahor, rubentournour@yahoo.com.ar
Waad salaaman tihiin. Waxaan haystay warqad lenovo k3 ah tan iyo bishii Luulyo, in muddo ah waxaan dareemay luminta xasaasiyadda meelaha qaar ee shaashadda laakiin ilaa shalay waxay ka badan tahay kalabar shaashadda oo xitaa ma furi karo terminaalka, shaashadda ayaa ku habboon xaalad aan xoqin ama kuuskuus ah.
Waxaan ka aqriyay dadka kale inay tahay dhibaato terminal ah, kuwa kale waxay dhahaan waxay ka timid ROM 5.0.1.
Haye, waxaan hayaa warqada lenovo k3 oo majirto wado lagu xidido, mar dambe ma aqaano waxa la sameeyo, waxaan isku dayay in ka badan 20 jeer mar walbana way ku dhacdaa isku mid, wax walbana way fiican yihiin illaa aan ka riixo dhamaan 3da badhan isla Waqtiga iyo waxaan ku soo kabanayaa laba ikhtiyaar oo Ingiriis iyo Shiinaha ah Fadlan ma i caawin kartaa Maxaan sameeyaa si aan ugu soo kabsado 8da badhan?
Waxaan rajeynayaa inaan sifiican isku sharaxay, mahadsanidiin kahor.
QOLKA XUN, BATARIGA YAR EE adag, MA HAYO IN AAD HESHO ogeysiisyada RADIO LED, OO AANAN SII SAARI KARIN QALAB KALA DUWAN Sim kasta, khibrad xun, ma jiraa qof jacayl kale leh?
Waad salaaman tahay, mahadsanid waan awoodey inaan si sax ah u rakibo Romka, laakiin tilmaamahu mar dambe uma shaqeynayaan sida daminta iyo shubista labalaab, ma i caawin kartaa? Mahadsanid iyo salaan
Waxaan xidid u dhigay qoraalka k3 sida aad tilmaamayso oo waxaan ku rakibay qolka xancin moobilkuna si fiican uguma xirmayo WiFi sida loo xaliyo mahadsanid
Waad salaaman tahay Julio, waxaa laga yaabaa inaad wax kale oo isbedel ah sameysay, maxaa yeelay sidoo kale waxaan raacay dhamaan talaabooyinkii Miguel uu si naxariis leh ugu duubay fiidiyowga wax dhibaato ahna kuma qabin. Salaan kadib waxaanan rajaynayaa in laguu xaliyo
Galab wanaagsan Julio, waxaan u maleynayaa in qof si uu kuu caawiyo, waa inaad tilmaantaa macluumaad dheeri ah. Markii aad dhahdo si fiican kuguuma xirmayo, ma sharraxeyso haddii ay kugu dhacdo marwalba ama mararka qaarkood, haddii WiFi uu la shaqeynayay romkii hore, haddii aad ku xirto guriga ama shabakad dadweyne, sida routerku yahay la habeeyay (oo muuqda / qarsoon, tallaabooyinka amniga, Mashiinka MAC, iwm), haddii shabakadaha kale ee kuu dhow ay muuqdaan, haddii aad kula xiriiri karto mobilada kale shabakaddaada ama haddii mobilkaaga aad ku xirmi karto shabakadaha kale. Waa inaad sameysaa dhowr baaritaan si aad isugu deyso inaad qeexdo guuldarada. Shanta k-3 ee aan ku rakibey roman-ka 'Xancin rom', midkoodna wax dhibaato iima siin xiriirka WiFi.
Waad salaaman tahay, Julio, dib ayaan u soo celiyay ROM-ka (ka dib markii la tirtiray), maxaa yeelay shalay taleefanku wuxuu isiiyay dhibaato bilow ah (aniga oo aan runtii ogeyn sababta, maadaama aanan waxba ka badalin qaabeynta ama aan rakibin wax barnaamij ah, waxay ahayd ka dib markii si toos ah loo shido, taas oo dhanka kale ah, horay ayaan u sameeyay weligoodna wax dhibaato ah ma siinin). Waxyaabaha ayaa ah, hadda, iima oggola in aan ka abuuro APN cusub goobaha. Waxaan isku dayay in aan xaliyo iyada oo APN gacanteeda loogu daro keydka dariiqa "/data/data/com.android.providers.telephony/databases/telephony.db", anigoo adeegsanaya tifaftiraha SQLite, laakiin aniga sidoo kale aniga ima shaqeynayo . Wixii talo bixin ah kahor intaadan rakibin ROM kale ama dib udejin warshad fadlan? Kaliya ku dar in labada nooc ee TWRP iyo ROM ay yihiin kuwa boostadan. Dhamaan wanaag.
Jawaab Juan A.
Waan ka xumahay, Francisco, waan ku wareeray magacaaga.
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa 2 su'aalood, tan hore ayaa ah in barnaamijka loo adeegsan karo in lagu xusho nalalka ogeysiinta sida la doono iyo tan labaadna waa sida aan u sameeyo in barnaamij kasta oo kor ku xusan ay u muuqato inaan wali u baahanahay inaan arko, taasi waa, ogeysiis lambar . Mahadsanid
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa taleefanka isbadal la'aan, maxaa yeelay waxaa laga keenay shiinaha, waxwalba waxay u shaqeeyaan si qumman, muggu ma ahan sidii aan filayay oo aad buu u kululaadaa markaan kamarada isticmaalo, wax xal ah miyaa jira tan, mahadsanid
Iima oggolaaneyso in aan nuqulo feylasha xusuusta gudaha, fariinta ka socota kombiyuutarka waa: lama koobiyi karo, aaladda ayaa joojisay ka jawaab celinta ama go'day
Si kastaba ha noqotee haddii aan waxyaabo ku koobi karo SD dhibaato la'aan, ma fahmin, waxaanan u baahanahay xusuusta gudaha xilligan, qof ma i caawin karaa?
Galab wanaagsan, waxaa laga yaabaa inaad ka boodday tallaabada "FORMAT DATA". Marka hawshan la fuliyo, wax kasta oo ku jira xusuusta gudaha ee taleefanka waa la tirtiraa sidaa darteedna dhammaan booskiisa ayaa loo heli karaa rakibidda cusub. Waxaan u sameeyay buug loogu talagalay dadka aan aqoonta lahayn, sidoo kale loo yaqaan 'clumsy' (sida aniga oo kale) oo aan ku sharxayo howsha oo dhan. Waxaan u diri doonaa ilaa 30 kaqeybgalayaasha madasha cidna iima sheegin inaan iyaga siiyay dhibaatooyin la socda talaabooyinkaas. Haddii aad u maleyneyso inay adiga wax kuu tari karto, si farxad leh ayaan kuugu soo diri doonaa.
Manuel, ma ii soo diri kartaa buugga buugga boostada? danielzomeno@gmail.com
Daanyeel, markaad haysato buugga, fadlan ma ii soo diri lahayd?
Ku jawaab lilian30
SANDRA MADINA LOPEZ dijo
Hello Francisco, waxaa laga yaabaa inaad i siiso fiilo, waxaan udhaxeeyaa iibsashada lenovo k3 note iyo infocus m560, ma garanayo waxa la sameeyo maxaa yeelay labadoodaba way ku dhegaan, infocus waxay iga walwalsan tahay awoodda batteriga hoose iyo dhaliilahaaga ku saabsan af-hayeenka nolosha wax walba oo aad wax ka qabatay qaybtaan .. rom
Jawaab SANDRA MEDINA LOPEZ
Hello Sandra, ma garanayo infocus, laakiin waxaan kuu sheegi karaa taleefoonno badan oo Shiine ah oo aan haystay, qoraalka K3 waa kan ugu fiican uguna xasilloon. Waxaan durba bilaabay roman-ka Xancin, anigoo si taxaddar leh u raacaya dhammaan tillaabooyinka illaa maanta, oo ku dhowaad sannad jirsaday, way igu habboon tahay, waa mid deg deg badan oo xasilloon. Si aan runta u sheego, waxa aniga aad ii xiisaynaya ayaa ah teleefoonka, wasak, internet-ka GPS-ka iyo muusigga wax walbana oo aan ka siiyo 10, baytarigu wuxuu socdaa ilaa laba maalmood wax yarna wuu adeegsadaa ilaa 3.
Waxaan rajeynayaa inaan caawiyey, Salaan
Hello Francisco, waa su'aal. Waxaad dhahdaa romkan waxaa loogu talagalay nooca 5,02 ee android laakiin si loo rakibo soo kabashada waa inaad haysataa 5.1. Taasi miyaanay khilaaf dambe abuurin?
Haddii aan ku iibsado taleefanka guriga taleefanka Spain miyaan helayaa isla Shiinaha Shiinaha? Oo sidee uga dhigtaa wargelinta la hoggaaminayo inay shaqeyso?
Waa salaaman tahay Francisco, ma kugula talin kartaa waxa lagu sameeyo taleefanka tan iyo berri waa inaan qaadaa oo waxaan jeclaan lahaa inaan uga tago anigoo diyaarsan.
Ugu dambayntii waxaan rakibay romkaan laba maalmood ka hor wax fudud ma ahayn laakiin waan sameyn karay, si fiican ayey u shaqeysaa ilaa iyo hada waxa kaliya ee aan sameeyay ayaa ah wax ka badalida apn of Argentina cad
maxaa yeelay internetka ma uusan shaqeyn wifi la'aan. waad mahadsan tihiin dhamaantiin !!!
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, waxaan ku dalbaday taleefankan aliexpress, wuu imaan doonaa waqti yar, ma ii soo diri kartaa casharradu si ay u xumaadaan? Waa aniga oo aan ahay iyo in badan. Waad ku mahadsantahay horay. abfv@hotmail.es
Waxaan kaa codsanayaa inaad i cafiiso Ana, fariintaadu gabi ahaanba way i dhaaftay. Hawlo badan iyo waqti yar. Waxaan kuu soo dirayaa buugga emailkaaga.
Jawaab Manuel Garrido
Shalay waxaan ku rakibay Lenovo-gayga waana raaxo, mahadsanid.
Waa salaaman tahay, maalin wanaagsan, su’aashaydu waxay tahay sidee ayuu shaashadda u soo baxaa? Miyuu si fudud u xoqaa mise waa mid ka mid ah shaashadaha ka samaysan waxyaabo aan xoq ahayn? mahadsanid iyo salaan
Habeen wanaagsan adiga oo qof walba salaamaya, waxaan u baahanahay caawimaad Waxaan naftayda u keenay Chile lenovo k3 note model k50-t3s Marka hore, internetku aniga ima shaqeeyo, kaliya wifi, inta kale wali ma hubiyo, haddii aad jawaab hayso Waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto, romka aan ku rakibi karo leonavo-kayga, waxaan rajeynayaa inaad ila soo socodsiin karto, aad baad u mahadsantahay, madashu aad ayey u wanaagsan tahay.
Subax wanaagsan oo ka timid Isbaanish, haddii aad internetka ku leedahay wifi, waxay ka dhigan tahay in taleefanka uu si habboon u shaqeynayo. Waa inaad xaqiijisaa inaad qandaraas lagashay shirkaddaada, inaad dhaqaajisay xogta, arag haddii ay lagama maarmaan tahay inaad kicinayso xog wareegaya mobilkaaga si aad uhesho, hubi inta jeer ee soo noqnoqda taleefankaaga shirkaddu waxay ka shaqeysaa aagga aad joogto, waxay la mid yihiin taleefanka gacanta, iwm.
Sida romka, taladaydu waxay tahay in la badalo midka asal ahaan kujira, waxaa ka buuxa barnaamijyo doqonimo ah oo kaliya cunaya kheyraadka iyo batteriga.
Ilaa ay wax iska beddelaan moodeellada ugu dambeeya ee k-3, roman-ka 'Xancin' ayaa si weyn kuu shaqeyn doona.
Sawirka meeleynta Alvaro Poblete dijo
Waa salaaman tahay, maqaal aad u wanaagsan, laakiin waxaan u maleynayaa inuu u baahan yahay cusbooneysiin. Shakhsiyan, waan ogahay romankaas waana wax aad u wanaagsan, hadaan isbarbar dhigno romkaan kan warshada ka imanaya waa ficil aad u weyn oo waxqabad ah, laakiin intaas kuma filna, isla isla isla goobta mobilka mobilada waxaan ku helay android 6.0 rom halkaas oo runtii aan la yaabay, waxqabadka, interface, runti waa mobiil ka duwan, aadna uga fiican Xancin.
Waxaan kugula talinayaa qof walba inuu ka dukaameysto oo uu tijaabiyo.
Jawaab Alvaro Poblete
Hello Alvaro, iga raali noqo, waa maxay ROM-kaas xageese ku yaaliin? Ama sideen u raadineynaa? Mahadsanid
Jawaab joaquin jimenez h
Waad salaaman tahay, waxaan Shiinaha ka iibsaday taleefan Lenovo K 3 ah oo wata Android 6, taleefanka oo dhami si fiican buu u shaqeeyaa laakiin dhibaatada kaliya ee i haysata waa shaashadda taabashada, wuu ku xannibayaa markaad fartaada u rogto si aad barnaamijyada uga gudubto si dhakhso leh uma socdaan, waa shaqo adag. Sidoo kale kuuma sheegayo markaad wax ku qorto kumbuyuutarka kharash badan ayaa ku baxaya waxay dhigaysaa xarfo aan ahayn xal ayaan u helayaa bedelka romka waa maxay waxa isku darsanaya inaan isticmaalo mahadsanid
Jawaab Claudio M. Parente
Frank Gonzalez dijo
Waa salaaman tahay Francisco, qoraal aad u wanaagsan, aad ayey u xun tahay in isku xidhka weyn ee faylasha loo baahan yahay hoos u dhaco.
Ku jawaab Franco Gonzalez
Wax walba waan rakibay sidaad ii sheegto laakiin markaan furayo taleefanka oo aan helo calaamadda android-ka, taleefanku wuu xidhan yahay ilaa 5-10 daqiiqo illaa aan ka galiyo pin-ka, maxaan khalday?
markaa taleefanka ayaa si sax ah u shaqeynaya
Subax wanaagsan, waxaan ka keenay dalka Spain LENOVO K3 NOTE K50.t5, WAAN HORAY WAAN LA HELAY ANDROID 5.1, su'aashu waa: Looma baahna mar dambe in la rakibo xididkan xancin? ¡?? …………. Waxay la socotaa Android 5.1, wali waxay la timaadaa codsiyada warshaddeeda Shiinaha. Mise waxaa jira qaab kale oo barnaamijyada looga saaro sanduuqa oo kala duwan? Mahadsanid. Salaan ka timid Paraguay SouthAmerica.
Telefoonku wuxuu la socdaa VIBEUI_V2.8_1535_5_128.1_ST_K50-T5
Ku jawaab robertocachomartinez
Waad ku mahadsan tahay wax ku biirinta weyn, ka hor intaanan sameyn waxaan qabaa shaki.
Miyuu qof reer Chile ah oo leh shabakad Movistar 4g ah sifiican ula shaqeeyaa romkaan cusub? Tan iyo markii aan ku iibsaday Lineo, 2 bilood ayaa laga soo gudbay waana hagaagsan tahay, laakiin waan necbahay barnaamijyadan Shiinaha waxaanan rabaa inaan sida ugu dhakhsaha badan uga soo saaro !!
Moodelkeygu waa nooca 'K50-T3s Android 5.1' waxaanan doonayaa inaan ogaado haddii romarku ka shaqeynayo terminaalkan.
iyo halkee baan ka heli karaa casharrada loo sameeyay cusub ee aad sheegtay? emailkaygu waa encompassessolari@gmail.com
Waad ku mahadsan tahay kaalmadaada iyo naxariistaada inaad ka caawiso telefoonadan gacanta ee Shiinaha!
Iyagu waa kuwa ugu fiican!
Michael Cuenca dijo
Waad ku mahadsantahay tabarucaada, laakiin waxaan isku dayay inaan soo dejiyo waxayna ii sheegaysaa in xiriirku hadda la heli karin, miyaad cusbooneysiin kartaa fadlan? mcuenca@tvalmansa.es.
Jawaab Miguel Cuenca
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa Lenovo K 3 note mtk horeyba waan u xididaystay, laakiin tan iyo markaas xogta ma shaqayso, waxaan u dhigay inay jabayso .. mahadsanid
Ku jawaab Rachi
Waad salaaman tahay waxaan raadinayaa xididka qolkeyga k50-t3s ee leh androit 6.0 waxaana rabaa inaan ku cusbooneysiiyo Oreo
Nooca cusub ee Telegram wuxuu isku darayaa YouTube-ka, Vimeo iyo ciyaartoyda SoundCloud ee ku jira sheekada